प्राचीन राशिफलको तपाईंको धनु राशी - सत्य वेद पुुस्तकहरू
02/06/2021 21/10/2021 Ragnar
धनु राशि चक्रको चौथो नक्षत्र हो र सवार धनुर्धारीको चिन्ह हो। धनु भनेको ल्याटिनमा ‘धनुर्धारी’ हो। आजको आधुनिक ज्योतिषशास्त्रमा प्राचीन ज्योतिष राशिको अध्यन गर्दा, तपाईले कुण्डली मार्फत सल्लाह लिनुपर्दा,धनु भन्नाले प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य र तपाईको व्यक्तित्वमा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नु हो।
तर के यो सुरुमा यसरी नै पढिएको थियो?
सचेत रहनुहोस्! यसको उत्तरले तपाईँको कुण्डलीको लाई अप्रत्याशित तरीकामा खोल्दछ। जब तपाईंको कुण्डली जाँच गर्नुहुन्छ तपाईंले आफूलाई सोचेको भन्दा फरक यात्रामा संलग्न भएको पाउनुहुन्छ …
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गरेका थियौं र प्राचीन कुण्डलीको कन्या देखि वृश्चिकसम्म जाँच गरिसकेका छौं, हामी धनुको साथ जारी राख्छौं।
नक्षत्र धनुको उत्पत्ति
धनु एक तारा नक्षत्र हो जसले एक घुमाउरो धनुर्धारीको तस्बिर बनाउँछ, प्राय जसो शरीर मानवको तर घोडाको खुट्टा भएको दैत्त्येको रूपमा देखाईन्छ। यहाँ धनुहरू बनाउने ताराहरू छन्। के तपाईं यस ताराहरूको फोटोमा दैत्य, घोडा, वा धनुर्धारीको जस्तो केही देख्न सक्नुहुन्छ?
धनु तारा नक्षत्र फोटो
यदि हामी ताराहरू लाई ‘धनु’ मा रेखाहरुद्वारा जोडे भने पनि अझै पनि सवार धनुर्धारीलाई ‘देख्न’ गाह्रो हुन्छ। जहाँ सम्म हामीलाई थाहा छ यो चिन्ह मानव इतिहासमा पछाडि फर्केर जान्छ।
धनु नक्षत्र रेखाहरुद्वारा जोडिएको
यहाँ इजिप्टको डेन्डेरा मन्दिरमा २००० वर्ष भन्दा पुरानो राशि छ, जहाँ धनुलाई रातोले गोलो लगाइएकोछ।
मिस्रको प्राचीन डेन्डेरा राशिमा धनु
राष्ट्रिय भौगोलिक ठूलो चित्र मार्फत धनु राशिलाई दक्षिणी गोलार्धमा देखाइएको छ। धनु ताराहरूलाई रेखाहरूमा साथ जोडेपछि पनि यस नक्षत्रमा सवार वा घोडालाई ‘देख्न’ गाह्रो छ।
राष्ट्रीय भौगोलिक नक्षत्र नक्शामा धनु
अघिल्लो नक्षत्रहरूमा जस्तै, धनुर्धारीको तस्बिर तारा नक्षत्रबाट आउँदैन। बरु, पहिलो ज्योतिषीहरूले ताराहरू बाहेक अरु बाट सवार धनुर्धारी सोचे । त्यसपछि तिनीहरूले यस तस्बिरलाई नक्षत्रमा चिन्हको रूपमा राखे। तल एक विशिष्ट धनु तस्बिर छ। तर जब हामीले धनुलाई वरपरका नक्षत्रहरूका साथ देख्छौं तब हामी यसको अर्थ जान्छौं।
विशिष्ट धनु ज्योतिषशास्त्र नक्षत्र तस्बिर
मूल राशि कथा
मूल राशिफल तपाईंको जन्म समय र ग्रहहरूमा आधारित तपाईंको दैनिक निर्णयहरूलाई सौभाग्य, स्वास्थ्य, प्रेम र भाग्य तिर मार्गदर्शन गर्ने कुंडली थिएन। आदि मानवहरूले यस योजनालाई ताराहरूमा १२ राशिक नक्षत्रहरू चिन्ह लगाएर सम्झे। हाम्रा प्रारम्भिक पूर्वजहरूले हामी प्रत्येक रात यी नक्षत्रहरू हेर्न र आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सम्झेको चाहन्थे। ज्योतिषशास्त्र मूलतः यस कथाको तारामा अध्ययन र ज्ञान थियो।
यस कथाको सुरुवात कन्या राशिमा कन्याको सन्तानबाट भयो। यो तुला राशिको तराजुको साथ जारी रह्यो, यो शेष हो कि हाम्रो कार्य सन्तुलन ज्यादै हल्का छन जुन हाम्रो हल्का कार्यहरूको उद्धारका लागि भुक्तान गर्न आवश्यक हुन्छ। वृश्चिकले कन्याको सन्तान र बिच्छीको बिचको संघर्षलाई प्रदर्शन गर्‍यो। तिनीहरूको शासनको अधिकारको लागि लडाई हो।
राशि कथामा धनु
धनुले यो संघर्ष कसरी अन्त्य हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दछ। हामी बुझ्छौं जब हामी वरिपरि नक्षत्रहरूको साथ धनु देख्छौं। यो ज्योतिषशास्त्रको प्रसंगले धनु राशिको अर्थलाई प्रकट गर्दछ।
राशिमा धनु – वृश्चिकको पूर्ण पराजय
धनुको खींचिएको तीर सिधै वृश्चिकको मुटुमा निशान लगाउँछ। यसले स्पष्ट रूपमा सवार धनुर्धारीले आफ्नो नश्वर शत्रुलाई नष्ट गरेको देखाउँदछ। यो प्राचीन राशिको धनुको अर्थ थियो।
धनुको अर्को राशि तस्बिर । उहाँकोको तिर सिधा बिच्छीमा लक्ष्य गरिएको छ
लेखिएको कथामा धनु अध्याय
येशूको अन्तिम विजय जो कन्या स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ उहाँको शत्रुमाथि बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको छ जुन धनुमा चित्रण गरिएको थियो। यस विजयको लिखित भविष्यवाणी यहाँ छ।
११.मैले स्‍वर्ग उघ्रेको देखें र त्‍यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो। त्‍यसमाथि सवार हुनुहुने “विश्‍वासयोग्‍य” र “सत्‍य” कहलाइनुहुन्‍छ। धार्मिकतामा उहाँले इन्‍साफ र युद्ध गर्नुहुन्‍छ। १२.उहाँका आँखा आगोका ज्‍वालाजस्‍ता थिए, र उहाँका शिरमा धेरै राजमुकुट थिए। उहाँमा एउटा नाउँ अङ्कित थियो, जो उहाँलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। १३.उहाँले रगतमा चोबलिएको पोशाक पहिरनुभएको थियो, र उहाँको नाउँ “परमेश्‍वरको वचन” थियो।१४. स्‍वर्गका सेनाहरू सेता र स्‍वच्‍छ मलमलका वस्‍त्र पहिरिई सेता घोडाहरूमा चड़ेर उहाँको पछिपछि लागे।१५. जाति-जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्‍कन्‍छ, र उहाँले फलामको डन्‍डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका क्रोधको दाख-कुण्‍ड उहाँले कुल्‍चनुहुन्‍छ। १६.उहाँका पोशाक र तिघ्रामा “राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु” अङ्कित छ। १७.तब मैले एउटा स्‍वर्गदूत सूर्यमा उभिरहेका देखें। तिनले मध्‍य आकाशमा उड्‌ने सबै पक्षीहरूलाई चर्को सोरले यसो भने, “आओ, परमेश्‍वरको ठूलो भोजमा भेला होओ।१८. तिमीहरूले राजाहरू, कप्‍तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र घोडाहरू र तीमाथि सवार हुनेहरू, फुक्‍का र कमारा-कमारीहरू, ठूला र साना सबैको मासु खानेछौ।” १९.अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्‍यो पशु र पृथ्‍वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएका मैले देखें।२०. तब त्‍यो पशु र त्‍यसको उपस्‍थितिमा अचम्‍म काम गर्ने झूटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्‍मका कामहरूद्वारा त्‍यस झूटो अगमवक्ताले त्‍यस पशुको छाप लिने र त्‍यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्‍धकको अग्‍नि-कुण्‍डमा जिउँदै फालिए।२१. बाँकी रहेकाहरूचाहिँ घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्‍केको तरवारद्वारा मारिए, र सबै पक्षीहरूले तिनका मासु अघाउञ्‍जेल खाए।
१.त्‍यसपछि अतल कुण्‍डको साँचो र एउटा ठूलो साङ्‌लो हातमा लिएका एउटा स्‍वर्गदूत स्‍वर्गबाट ओर्लेर आएका मैले देखें। २.तिनले त्‍यो अजिङ्गर, त्‍यो प्राचीन सर्प, जो दियाबलस वा शैतान हो, त्‍यसलाई पक्रे, अनि एक हजार वर्षका निम्‍ति बाँधेर राखे।३. तिनले त्‍यसलाई अतल कुण्‍डमा फालिदिए, र त्‍यो कुण्‍ड बन्‍द गरी मोहोर लगाइदिए, ताकि एक हजार वर्ष अन्‍त्‍य नभएसम्‍म जाति-जातिहरूलाई त्‍यसले बहकाउन नपाओस्‌। त्‍यसपछि केही समयको निम्‍ति त्‍यसलाई फुक्‍का गरिनुपर्छ।
प्रकाश २०: १-३
७.एक हजार वर्ष बितेपछि शैतान त्‍यसको कैदबाट छोडिनेछ, ८.र पृथ्‍वीका चारै दिशामा भएका देश-देशका मानिसहरूलाई बहकाउन, अर्थात्‌ गोग र मागोगलाई लड़ाइँको निम्‍ति भेला गर्न निस्‍केर आउनेछ। तिनका संख्‍या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ।९. तिनीहरूले सारा पृथ्‍वीभरि गएर सन्‍तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्‍वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्‍म पार्‍यो।१०. तिनीहरूलाई बहकाउने त्‍यो दियाबलस आगो र गन्‍धकको कुण्‍डमा फालियो, जहाँ त्‍यो पशु र झूटो अगमवक्ता पनि थिए। त्‍यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदासर्वदै यातना भोग्‍नेछन्‌।
प्रकाश २०: ७-१०
प्राचीन राशिका यी पहिलो चार संकेतहरू: कन्या, तुला, वृश्चिक र धनुले १२ अध्याय राशि कथामा एक ज्योतिषीय एकाई बनाउँछ जुन आउँदै गरेको शासक र उहाँको विरोधीलाई केन्द्रित गर्दछ। कन्याले आफ्नो एउटा कन्या स्त्रीबाट आउने भविष्यवाणी गरेको छ। तुला राशिले भविष्यवाणी गरेको छ कि हाम्रो अपर्याप्त योग्यताले मूल्यको भुक्तान आवश्यक पर्दछ। वृश्चिकले त्यो मूल्य को प्रकृतिको भविष्यवाणी गरको छ। धनुले आफ्नो अन्तिम विजयको बारेमा भविष्यवाणी गरे जसमा ती धनुर्धारीको तीर बिच्छीको मुटुमा सिधा लक्षित गरिएको थियो ।
यी चिन्हहरू सबै व्यक्तिको लागि हो, प्रत्येक नक्षत्रको महीनामा जन्मेका लागि मात्र होईन। यदि तपाईं नोभेम्बर २३ र डिसेम्बर २१ को बीचमा नजन्मेको भए पनि धनु तपाईंको लागि हो । मनु / आदमका छोराछोरीहरूले उनीहरूलाई ताराहरूमा राखे जसले गर्दा हामी शत्रुलाई पराजित गर्न सक्दछौं र त्यस अनुसार हाम्रो आस्था छनौट गर्न सक्दछौं। येशूको पहिलो आगमनले कन्या, तुला र वृश्चिकलाई सम्पन्न गर्नुभयो। धनुको पूर्णता उहाँको दोस्रो आगमनको लागि पर्खिरहेको छ। तर पहिलो तीन चिन्हहरू पूरा भएपछि हामीसंग विश्वास गर्ने कारण छ कि धनु चिन्हले पनि यसको पूर्ति पाउनेछ।
प्राचीन धनु राशिफल
राशिफल ग्रीक ‘होरो’ (घण्टा) बाट आएको हो र बाइबलले यस घण्टा लगायत धनुको घण्टा लाई हाम्रो लागि चिन्हित गर्दछ। धनु होरो पठन हो
३६. “तर त्‍यस दिन र घड़ीको विषयमा पिताबाहेक कसैले जान्‍दैन, न त स्‍वर्गका दूतहरूले, न पुत्रले।४४. यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ।
येशुले हामीलाई भन्नुभएको छ कि उहाँको आगमनको निश्चित समय (होरो) र उहाँको शत्रुको पूर्ण पराजय परमेश्वर बाहेक कसैलाई थाहा छैन। जे होस्, त्यो समय नजिकिदै आएको संकेतहरु छन्। यसले भन्छ कि हामी यसको लागि तयार हुँदै छैनौ।
तपाईंको धनु पठन
तपाईं र म तल दिशानिर्देशको साथ आज धनु राशिफल पढ्न लागू गर्न सक्दछौं।
धनुले हामीलाई भन्दछ कि तपाईंले ख्रीष्टको आगमनको समय र शैतानको पूर्ण पराजयको समय भन्दा पहिले धेरै अलमल्याउने अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा, यदि तपाईंले दैनिक यसलाई नवीकरण गरेर तपाईंको मन परिवर्तन गर्नुहुन्न भने तपाईं यस संसारको मापदण्डमा परिणत हुनुहुनेछ। त्यसपछि त्यो समयले तपाईंलाई अप्रत्याशित रूपमा हिर्काउँछ र तपाईं उहाँ प्रकट हुँदा उहाँसंग उपयुक्त हुनुहुन्न। त्यसोभए यदि तपाईं त्यो हराएको समयको सबै डरलाग्दा नतिजाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफैलाई तयार पार्न दैनिक चेतनापूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र श्रृङ्खलीय नाटकहरूको गफ र जालको पछाडि तपाईं दिमाग चलाईरहनु भएको छ वा छैन भन्ने बारे जानकारी लिनुहोस्। यदि त्यसो हो भने त्यसले सम्भवतः तपाईको दिमागको दासत्व, घनिष्ठ सम्बन्धहरु गुमाउने जस्ता लक्षणहरूको परिणाम ल्याउँछ र निश्चित रूपमा अधिकांश व्यक्तिहरूसँग उहाँको आगमनको समय पनि गुमाउनुहुनेछ।
तपाईंको व्यक्तित्वसँग यसको दुबै शक्ति र कमजोरीहरू छन्, तर शत्रु, जसले तपाईंलाई अलमल्याउन चाहन्छ, तपाईंलाई आफ्ना कमजोर विशेषताहरूमा आक्रमण गर्दछ। यो बेकार गफ, अश्‍लील सामग्री, लोभ, वा सोशल मिडियामा तपाईंको समय खेर फाल्ने, उहाँलाई तपाईं कुन कुरामा परीक्षामा पर्नुहुन्छ भनेर सबै थाहा छ। त्यसैले मद्दत र मार्गदर्शनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि तपाईं सीधा र साँघुरो बाटोमा हिंड्न सक्नुहुनेछ र त्यो समयको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ। केहि अरूलाई खोज्नुहोस् जसले त्यो समय गुमाउन चाहँदैनन् र सँगै तपाईं दिनहुँ एक अर्कालाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ताकि यो तपाईंमा अप्रत्याशित रूपमा नाओस्।
थप राशि कथा मार्फत र धनुमा गहिरिएर
अर्को चार राशि चिन्हहरुले एक आउँदै गर्नुहुने को कामले हामीलाई कसरी असर गर्छ भनेर प्रकट गर्दै एक ज्योतिष एकाई बनाउँछ , जुन मकरबाट शुरू हुन्छ। कन्याको साथ कथाको सुरूवात गर्नुहोस्, वा यसको आधार यहाँ सिक्नुहोस्।
धनु राशिको लिखित अभिलेखको गहिराइमा जानको लागि
• कल्की जस्तै फर्किदै ताराहरू बाट बाहिर निस्किनु
• कुरुक्षेत्र युद्धमा जस्तै: विजयी राजाको आगमन
दैनिक राशिफल, मकर कुंडली, मकर नक्षत्र, मकर मकर, मकर राशि, मकर राशि का चिन्ह, मकर राशिफल